किन सुस्तायो सुनको व्यापार ? देशभर मुश्किलले १० केजीमात्र कारोवार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > किन सुस्तायो सुनको व्यापार ? देशभर मुश्किलले १० केजीमात्र कारोवार
किन सुस्तायो सुनको व्यापार ? देशभर मुश्किलले १० केजीमात्र कारोवार
काठमाडौं । सुनको मूल्य धमाधम आकाशिँदै गएपछि कारोबार सुस्त हुदैँ गएको छ । बढि कारोवार हुने साउन महिना र तीज नजिकिँदा पनि देशभरका सुनचाँदी पसलहरू लगभग सुनशान नै देखिन्छन ।
पसलमा गरगहना किन्नेभन्दा विक्री गर्ने ग्राहक बढी आउन थालेपछि सुनको कारोवार उल्टो भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि यसको मूल्य बढेको हो । अहिले नेपाली बजारमा प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य ७० हजार रुपैयाँ छ । जुन साउन २४ गतेदेखि स्थिर छ ।
मुल्य घट्ने छाँटकाँट देखिएको छैनन तर सामान्य अवस्था आउँदा पनि प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ भन्दा तल नझर्ने संकेत छ । साउन महीनामा मात्र सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ५०० बढेको छ । महासंघका अनुसार साउन १४ गतेसम्म सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँमा घटवढ हुँदै आएको थियो । साउन १५ देखि २३ गतेसम्म लगातार बढेको थियो । अहिले ७० हजार रुपैयामा स्थिर छ ।
कारोबार कम भएपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले बैंकबाट सुन किन्न बन्द गरेका छन् । अहिले नेपाली बैंकहरूमा ७३० केजीभन्दा बढी सुन थन्किएको छ । सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई विक्री गर्ने अधिकार वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्रै छ । कारोबार घटेपछि बैंकहरूमा सुन जम्मा हुँदै गएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुुसार देशभरका २२ हजार सुनचाँदी पसलमा यो मौसममा दैनिक ४० केजीसम्म सुन बेचबिखन गरेपनि अहिले मुश्किलले १० केजी सुनको मात्र कारोबार हुने गरेको छ ।
२०७६ साउन २८ गते ०८:०२ मा प्रकाशित
ललितपुरमा दुई अर्ब ७६ करोड राजश्व संकलन
गरिमाले गर्यो ५९ करोड २२ लाख खुद नाफा आर्जन, अधिकांस सूचकमा सुधार
अब दुर्घटना भए ‘अन द स्पट’ रकम पाइने !
उद्योग वाणिज्य संघमा कटुवाल
पूर्वधारमा मिलेर लगानी गर्न नेपाल र चीनबीच समझदारी
मेगा, हिमालयन, एसबिआई, सिटिजन्सलगायत १० कम्पनीको साधारणसभा आज
दुई महिनामा अण्डाको भाउ दुई वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च